गुणस्तरहीन यी सिमेन्टदेखि होशियार ! « रिपोर्टर्स नेपाल
(Thursday 2nd December 2021)
गुणस्तरहीन यी सिमेन्टदेखि होशियार !
प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७८, बिहीबार
काठमाडौं, २ मंसिर । सिमेन्टहरुको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएकोमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले परीक्षण गर्दा गम्भीर खुलासाहरु भएका छन् । केही सिमेन्टको ग्रेड उल्लेख गरेभन्दा कम पाइएको छ ।
जगदम्बा, मारुती र युनाइटेड सिमेन्टको ग्रेड कम पाइएको हो । विभागले परीक्षण गर्दा ग्रेड उल्लेख भएभन्दा कम पाएपछि विक्रीमा रोक लगाएको छ । बजारमा विक्रीका लागि लगिएका सिमेन्टहरु पनि जफत गर्न निर्देशन दिदै १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन भनिएको छ ।
जगदम्बाको पीपीसी सिमेन्ट, मारुतीको ४३ र युनाइटेडको ५३ ग्रेड भनिएको सिमेन्टको नेपाल गुणस्तर बमोजिम नरहेको विभागले हिजो जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
मारुतीको संकलित नमूनाको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एमपीए ७ र २८ दिनको मान क्रमशः ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ भएको, युनाइटेडको ३७ र ५३ हुनुपर्नेमा ३५ र ३९ भएको र जगदम्बाको न्यूनतम १६ र २२ हुनुपर्नेमा १५ र २० मात्र भएको परीक्षणबाट देखिएको विभागले जनाएको छ ।
नेपाल गुणस्तर बमोजिम नभएका यी सिमेन्टहरु अत्याधिक प्रयोग हुनेमा पर्दछन् । देशका विभिन्न भवन, पुल, बाटोघाटो, ठूला आयोजना निर्माणमा प्रयोग भएका सिमेन्टको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नुले जोखिमहरु रहेको देखिन्छ ।
एनएमबि बैंक एशियाकै उत्कृष्ट बैंक बन्न सफल
काठमाडौं, १५ मंसिर । एनएमबि बैंक एशियाको उत्कृष्ट बैंक बनेको छ। बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना
नेप्सेमा आज सामान्य अंकको बृद्धि, कारोबार रकम ह्वात्तै घट्यो
काठमाडौं, १५ मंसिर । शेयर बजारमा आज सामान्य अंकको बृद्धि भएको छ । नेप्से बुधबार
एनएमबि बैंकको साधारण सभा पुस २२ गते, यस्ता छन् एजेन्डा ?
काठमाडौं, १५ मंसिर । एनएमबि बैंकले पुस २२ गते साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको
‘कम्प्युटर सुरक्षा दिवस’को अवसरमा एसबिआई बैंकका कर्मचारीले गरे प्रतिज्ञा
काठमाडौं, १५ मंसिर । “कम्प्युटर सुरक्षा दिवस ” को अवसरमा नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले विशेष
सिद्धार्थ बैंक र स्पर्श मल्टि स्पेसियालिटीबीच सम्झौता, बैंकका ग्राहकले अस्पतालमा २५% छुट पाउने
काठमाडौं, १५ मंसिर । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले विरगञ्जको बहुअरी स्थित स्पर्श मल्टिस्पेसियालिटी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको
नवलपरासीमा कामना सेवा विकास बैंकको दुई शाखा विस्तार
काठमाडौं, १५ मंसिर । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले थप नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ
विदेशी मुद्रा सटहीदर आज कति ?
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार आज अमेरिकी डलरको खरिददर ११९ रुपैयाँ ९६
सर्वोच्चको ७० वर्षे इतिहास: पहिलोपटक गोला प्रक्रियाबाट पेसी
काठमाडौं, मंसिर १६ । सर्वोच्च अदालतमा बुधबारबाट न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर १६ । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको साझा लक्ष्यसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता
रोकिएन दिनदहाडै घुस खाने क्रम
काठमाडौं, मंसिर १६ । सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा उपसचिव र शाखाअधिकृत स्तरका